ကူပွန် Lingo နှင့်ဝေါဟာရ - နှုန်းထားများ
ချောကလက် chip ကိုမုန့်ဒိန်ခဲ brownie စာရွက်
vanilla wafer cheesecake စာရွက်မုန့်ဖုတ်သည်မဟုတ်
ကူပွန်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားတစ်ခု ... stacking, MIR, OYNO ... ဤသူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း ဤတွင်အချို့ဘုံကူပွန်စကားလုံးများ၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ... သင်စာရင်းတွင်မပါသောတ ဦး တည်းကိုဖြတ်ပြီးလာလျှင် .. ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်စွန့်ခွာကျနော်တို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်!
မင်းတို့အားလုံး: သင်အားလုံးသည်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အမေဇုံ သောအတူထုပ်နေသည် .. သင်ကမှန်းဆ! ကူပွန် .. သူတို့လည်းအကြီးအချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ပိုပြီးပါရှိသည်! သင်ဤမဂ္ဂဇင်းကိုရရှိပါကအရောင်းနှင့်တွဲဖက်ရန်ကူပွန်များကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။
Balance Rewards: Balance Rewards အစီအစဉ်သည် Walgreens ဆုပေးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်၏အသင်း ၀ င်မှုကိုအသုံးချပြီးပစ္စည်းများကိုချက်ချင်းသိမ်းဆည်းရန်နှင့်အပတ်တိုင်းပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများကိုရမှတ်များရရန်။ Walgreens ကဒ်များအတွက်အချက်များရွေးယူပါ။
စာ ဖြေ - ကူပွန်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုစည်းရုံးတယ်။
BOGO: တစ်ခုဝယ်ပါ သငျသညျအရောင်း၌ဤတွေ့မြင်မကြာခဏတ ဦး တည်းအခမဲ့ရသို့မဟုတ်တ ဦး တည်းစျေးနှုန်းတစ်ဝက်ကိုဝယ်မဝယ်မကြာခဏ။
BTFE : ပညာရေးအတွက်ထောင့်ကွက်များ။ ၎င်းသည်တံဆိပ်ခေါင်းများ (သို့) ကူပွန်များဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရန်ကျောင်းများမှစုဆောင်းပြီးလူများအတွက်ကူပွန်များရောင်းဝယ်သည်။
ကက်သရင်း / CAT: Catalinas သည်ကူပွန်များဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်များမှတည်ရှိသောစက်ငယ်များမှထုတ်ယူသောကူပွန်များဖြစ်သည်။ ကူပွန်များသည်နောက်တစ်ခေါက်တွင်ထိုစတိုးဆိုင်တွင်တရားဝင်သည်။ သူတို့မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မကြာခဏရှိတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်ဆေးဖို့သေချာစေပါ။
ဘာဂါအတွက် sauteed မှိုအောင်ဘယ်လို
ကိုကာကိုလာ / ကိုကာကိုလာဆု : ကိုကာကိုလာကုန်ပစ္စည်းများ၏ထိပ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, သူတို့ကိုစုဆောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်များအတွက်ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါသည် MyCokeRewards.com ။
ကူပွန်ထည့်ပါ ဖြေ - Insert ဆိုတာတနင်္ဂနွေနေ့သတင်းစာတွေမှာများသောအားဖြင့်တွေ့ရတဲ့ကူပွန်တွေရဲ့အထုပ်တွေ၊ စာအုပ်ငယ်တွေ။ ဘုံထည့်သွင်းပါဝင်သည်
Procter နှင့် Gamble (PG)
Plum အနီရောင် (RP)
သင်သည်အများအားဖြင့်အပေးအယူများနှင့်ကူပွန်ကိုက်ညီမှု ups ပေါ်တွင်ဤထည့်သွင်းရည်ညွှန်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ (RP 01/27/13) ... ဒီဇန်နဝါရီလ 27, 2013 တွင်သတင်းစာ၌တွေ့အနီရောင် Plum ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
Avid ကူပွန်သူများသည်ဤကြီးစွာသောထည့်သွင်းမှုများရရန်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်စာရွက်အနည်းငယ်ကိုရယူပါလိမ့်မည်။ ဒါကသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောအပေးအယူနှင့်အတူတက်ကိုက်ညီခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ စနေနေ့ညနေခင်းများတွင် Spend With Pennies သည်တနင်္ဂနွေကူပွန်ကြိုတင်ကြည့်ရှုသည့်နေရာတွင်နောက်လာမည့်နေ့တွင် (၀ ယ်လိုသည့်ဒေသနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်) စက္ကူတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
နှစ်ဆသို့မဟုတ်နှစ်ဆ: အချို့သောစတိုးဆိုင်များသည်ကူပွန်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောပမာဏအထိနှစ်ဆတိုးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်ဒေါ်လာ ၀.၂၀ ကူပွန်ရှိပါကသင်၏စတိုးဆိုင်သည်ဒေါ်လာ ၀.၄၀ အထိနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။ သင်၏စတိုးဆိုင်ကိုနှစ်ဆတိုးရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်လစီများကိုစစ်ဆေးရမည်။
EB / ECB : Extra Bucks / Extra Care Bucks သည် CVS ဆေးဆိုင်ဆုချသည့်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင်မှာမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။ EB သည်သင်၏နောက်ဝယ်ယူမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်“ CVS cash” နှင့်တူသည်။ အချို့သောရောင်းသောပစ္စည်းများသည် EB ကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သင်၏ EB ကိုသင်နောက်ဝယ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ EB အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးပါကသင်၏ EB သည်သင်၏လက်ခံဖြတ်ပိုင်း၏အောက်ဆုံး၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ ဤသည်ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်အခမဲ့အပေးအယူအဘို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုကို $ 1 နှင့်သင်ဝယ်ယူလျှင် $ 1 EB ဆိုလျှင်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှ $ 1 ကိုပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်တွင်ထိုပစ္စည်းကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ရန်ကုန်သွားမည်။
EXP : သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်
H & B သို့မဟုတ် HBA ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပအထောက်အကူများ။ သွားတိုက်ဆေး၊ မိတ်ကပ်၊ ရေမွှေးစသည်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အိုင်ပီ အင်တာနက်ပရင်တာ သင်အွန်လိုင်းပုံနှိပ်နိုင်သည်ကူပွန်
ငါ : Rebate အတွက်မေးလ်။ ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်, စတိုးဆိုင်၌သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပင်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူတွေ့ရှိရကမ်းလှမ်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာများအတွက်သင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ထားရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်တန်ဖိုးကြီးပြီးစုဆောင်းမှုများစွာရနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူကူပွန် ထုတ်လုပ်သူမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သောကူပွန်များ။ သင်သည်ဤပစ္စည်းများကိုစတိုးဆိုင်တွင်ရွေးသောအခါထုတ်လုပ်သူကကူပွန်တန်ဖိုးအတွက်စတိုးဆိုင်ကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။
ဖွင့်လှစ် : အိတ်ဆောင်ထဲက။ ဤသည်မှာသင်သဘောတူညီမှုအတွက်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှသင်ပေးရမည့်အမှန်တကယ်ငွေဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်နောက်ဆုငွေများကဲ့သို့သောအခြားလျော်ကြေးပေးခြင်းပုံစံများကိုရနိုင်သည်။
Play : သင်၏နောက်အမိန့်တွင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုစတိုးဆိုင်တွင်သင်နောက်ထပ် ၀ ယ်ယူသောအခါသင်အသုံးပြုသောငွေစု / ငွေပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။
P&G: Procter & Gamble ။ ထည့်သွင်းခြင်း (အပေါ်တွင်ထည့်ပါကိုကြည့်ပါ) နှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ Procter & Gamble ကိုရည်ညွှန်းသည်။ P&G သည်လူသိများသောထုတ်ကုန်များစွာကိုထုတ်လုပ်သည်။ (သူတို့ကအကြီးအကျယ်နမူနာတွေလည်းပေးတယ်။ လေးပုံတစ်ပုံလောက်မင်းတောင်းခံနိုင်တယ်!)
ဒိန်ခဲ Fondue အတွေးအခေါ်များအတွက်နှစ်ပါဘာ
စျေးပွဲ (ခေါ်ကြော်ငြာပွဲ) : စတိုးဆိုင်အတော်များများကသင့်ကိုအခြားစတိုးဆိုင်တစ်ခု၏ကြော်ငြာကိုယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်၊ သူတို့ကအခြားစတိုးပေးသည့်မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်မဆိုကိုက်ညီလိမ့်မည်။
မိုးစစ်ဆေးမှု ဖြေ။ ။ စတိုးဆိုင်ကရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာကုန်သွားပြီဆိုရင်မိုးရွာတာစစ်ဆေးဖို့သင်မကြာခဏတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဟာရောင်းဈေးကိုလေးစားကြပါလိမ့်မယ်။ သင်၏မိုးရေစစ်ဆေးမှုကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့စွဲရှိသည်။
RR: ဆုချီးမြှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ဤသည် Walgreens ဆုကြေးငွေအစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သူတို့၏ Weekly Ad သို့မဟုတ် In-store Promotion တို့တွင်ကြော်ငြာသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောပစ္စည်း (များ) ကိုဝယ်ယူသောအခါသင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်၏နောက် Walgreens စျေးဝယ်သည့်ခရီးတွင်ရွေးနိုင်သည်။
RP: အနီရောင် Plum ။ (ထည့်ခြင်းများကိုကြည့်ပါ) Red Plum သည်သင်၏ Sunday Papers တွင်မကြာခဏတွေ့လေ့ရှိသောကူပွန်ထည့်သွင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Red Plum တွင်လည်းအွန်လိုင်းကူပွန်များရှိသည်။
အက်စ်အက်စ် : စမတ်ရင်းမြစ်။ (Insert ကိုကြည့်ပါ) Smart Source သည်သင်၏ Sunday Papers တွင်မကြာခဏတွေ့လေ့ရှိသောကူပွန်ထည့်ခြင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Smart Source တွင်အွန်လိုင်းကူပွန်များလည်းရှိသည်။
Stack / Stacked Stack ယေဘုယျအားဖြင့်ငွေစုဆောင်းမှုကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့ကူပွန်နှစ်ခုကိုအတူတကွသုံးတာကိုဆိုလိုပါတယ် သငျသညျမကြာခဏအကြီးအငွေစုဘို့တူညီသောပစ္စည်းပေါ်တွင်စတိုးဆိုင်ကူပွန်နှင့်အတူထုတ်လုပ်သူရဲ့ကူပွန် 'stack' နိုင်ပါတယ်။ မှတ်စု: ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ထုတ်လုပ်သူ၏ကူပွန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစတိုးဆိုင်ကူပွန်ကို“ စုပုံမထား” ပါ။
ကူပွန်စတိုး : ဤပစ္စည်းသည်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်ဘဲစတိုးမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သောကူပွန်များဖြစ်သည်။ ဤကူပွန်များအတွက်စတိုးဆိုင်များသည်ထုတ်လုပ်သူများထံမှငွေကြေးပြန်လည်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
UPR or + UP: Up ကိုဆုလာဘ်။ ဤသည် Rite Aid များအတွက်ဆုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ကျန်းမာကတ်ပြားကိုစာရင်းသွင်းလျှင် Up Rewards အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း၏အောက်ခြေတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏နောက်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေသားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
WYB : သင်ဝယ်တဲ့အခါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုထက် ပို၍ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သောကူပွန်များသို့မဟုတ်ရောင်းအားအချို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာသင်သည်ပစ္စည်းနှစ်ခုဝယ်သောအခါဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာသိမ်းဆည်းပါ။ $2သိမ်းပါ2WYB2။